Global Voices teny Malagasy » Kazakhstan: Miresaka momba ny toekarena ireo bilaogera nosakanana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Avrily 2019 5:07 GMT 1	 · Mpanoratra Adil Nurmakov Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Kazakhstan, Fampandrosoana, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna
Na dia mbola tsy azo hidirana amin'ny alalan'ny telecom nasionaly mpanao ampihimamba Kazakhtelecom aza ny LiveJournal, sehatra famahanam-bilaogy lehibe ao amin'ny sehatra post-Sovietika, anisan'izany i Kazakhstan, dia mbola mahita fomba hanehoana ny heviny an-tserasera ny mpientanentana amin'ny aterineto. Ny toekarena no lohahevitra lehibe – tahaka ny mety any an-toeran-kafa tato ho ato ihany koa.
Alim-atenbek naneho hevitra momba ny tatitra iraisam-pirenena amin'ny fahafaha-mifaninana navoakan'ny Foibe Manerantany Ara-toekarena (WEF amin'ny teny anglisy ). Nanjary olana tena goavana iray any Kazakhstan ny fahafahan'ny firenena mifaninana, raha telo taona lasa izay, nanambara tanjona goavana hiditra ho anatin'ireo firenena dimampolo afa-mifaninana indrindra manerantany i Kazakhstan. Na dia izany aza, nanomboka tamin'ny taona 2006 – raha nahomby tamin'ny laharana faha-51 i Kazakhstan – dia nihemotra faha-66 ny laharan'ny firenenaavy eo ! Alim-atenbek nanamarika  hoe [ru]:
Famantarana ny fomba fiasan'ny governemantantsika izany. Manontany tena aho hoe ahoana no hitantarana izany zava-misy izany ao amin'ny haino aman-jerintsika… Araka ny nolazain'ny iray tamin'ireo olom-pantatro, mpahay toekarena hajaina avy ao amin'ny Oniversite Berkeley hoe: “Mitombo ny toekarenanareo,fa tsy mandroso!” Heveriko fa tamin'ny voalohandohan'ny taona 2007 no vanim-potoana goavana tamin'ny fahafahantsika mifaninana. Ankehitriny, dia firenena mandany solika tafahoatra isika, ary toa mbola ho ela vao ho tapitra izany fiankinan-doha izany.
Maro ireo mpanara-maso lasa mandray ny tsena Kazakhstani ho kely loatra ho an'ny tetikasa fandraharahana goavana vaovao noho ny tsy fahampian'ny fiverenan'ny fampiasam-bola. Manome ny heviny mahatonga izany i Megakhuimyak:
Azo iadian-kevitra sy diso izany fiheverana izany. 1. Mihatra amin'ny sehatrasa rehetra izany. 2. Marobe ireo fandraharahana azo trandrahana ao Kazakhstan; ankoatra izany, misy ny sehatra azo atao ampihimamba ao anatin'ny 5-10 taona. 3. Vitsy ireo fitaovana famokarana asa izay azo vidiana amin'ny vidiny hahazoana tombony. Noho izany – eny, kely ny tsena. 4. Ny antony lehibe mahatonga ny orinasa tsy te-hampivoatra tetikasa vaovao tanteraka dia ny loza ara-politika fa mety hisy olona ho avy sy haka ny orinasanao. 5. Indrisy, satria miha-antitra ny filohantsika, dia mitombo ny mety hizarana ireo fananana – ary miha-malina hatrany hatrany ireo orinasa vaovao.
Tsy ireo orinasa ihany no miha-malina hatrany – fa tafiditra tanteraka amin'ny fitsoahan'ny renivola any amin'ny paradisan-ketra malaza be izy ireo, dass nilaza  hoe [ru]:
Tamin'ny tapany voalohan'ny taona 2008 monja, tafakatra 1,5 miliara dolara ny ny fampiasam-bola Kazakhstaney tany ivelany. Ny toerana tena nanintona indrindra dia i Holandy (15,3%), Soisa (10,6%), Nosy Britanika Virgin (8,3%), Etazonia (7,3%). Tsy tokony havoaka ampahibemaso ny vaovao toy izany – ho tezitra ireo olom-pirenena tsy niomana ary hanomboka hitezitra amin'ny governemanta. Saingy raha mijery ireo nosy virijiny ireo ianao dia hanaiky fa tsy mendrika fanenenana ny antsasaky ny miliara.
Navoaka tao amin'ny neweurasia.net ihany koa
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/20/137341/
 Manome : http://megakhuimyak.livejournal.com/499040.html
 neweurasia.net : http://www.neweurasia.net/2008/10/30/kazakhstan-blocked-bloggers-discuss-economics/